ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်နံပါတ်(၇)ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာက ဘယ်သူများလဲ
ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ကျောနံပါတ် (၇)ပိုင်ရှင်သစ်က ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ
24 Aug 2018 . 9:26 PM
ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်နံပါတ်လို့ သတ်မှတ်ရမယ့် ကျောနံပါတ်(၇)ရဲ့ ပိုင်ရှင်သစ်က ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ။ ဒါက ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေ အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ ပေါ်တူဂီ နာမည်ကျော်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo က (၉)နှစ်ကြာ ၀တ်ဆင်ခဲ့ပြီး သူ မရှိတော့တဲ့နောက်မှာ ဒီနံပါတ်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ကစားသမားက ဘယ်သူလဲဆိုတာ အခုလောလောဆယ်တော့ ဝေခွဲမရသေးပါဘူး။ ရီးယဲလ်အသင်းအနေနဲ့လည်း ဒီလို ဂန္ထ၀င်နံပါတ်ကို ကစားသမားတစ်ဦးစီ အလျင်စလို လွှဲပြောင်းပေးဖို့ မရှိဘဲ သေသေချာချာ ဂရုစိုက်စဥ်းစားသွားမယ့် အနေအထားပါ။
ရီးယဲလ်အသင်းဟာ အခုနွေရာသီမှာ PSG အသင်းရဲ့ ပြင်သစ်လူငယ်ကြယ်ပွင့် ဘာပေ Mbappe ကို ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့် ဘာပေက နံပါတ်(၇)ပိုင်ရှင်သစ် ဖြစ်လာမလားဆိုပြီး ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ စပိန်နာမည်ကျော် အားကစားသတင်းစာ AS က ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ကျောနံပါတ်(၇)ကို လက်ရှိ ကစားသမားထဲက ဘယ်သူ ၀တ်ခွင့်ရသင့်သလဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေကို မဲဆန္ဒကောက်ခံခဲ့တော့ အံ့အားသင့်စရာ အဖြေထွက်လာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေက နံပါတ်(၇)ကို စပိန်လူငယ်ကြယ်ပွင့် အဆန်စီယို Asensio ကို ရွေးချယ်ခဲ့လို့ပါပဲ။ ပရိသတ်ကြီးရေ . . ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ နံပါတ်(၇)ပိုင်ရှင်သစ်က သတင်းတွေထွက်နေသလို ဘာပေ ဖြစ်နေမလား၊ ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေ ဆန္ဒရှိနေတဲ့ အဆန်စီယို ဖြစ်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ပေါင်း (၃၈)နှစ်အတွင်း နံပါတ်(၇) ၀တ်ဆင်မယ့်သူ မရှိတဲ့ ပထမဆုံး ရာသီဖြစ်မလား ဆိုတာတော့ . . .
Cristiano Ronaldo (10/11 – 17/18), Raúl (95/96 – 09/10), Emilio Butragueño (85/86 – 94/95), Juanito (80/81 – 85/86), Joseíto (55/56),
ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ကြောနံပါတျ (၇)ပိုငျရှငျသဈက ဘယျသူမြားဖွဈမလဲ
ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျနံပါတျလို့ သတျမှတျရမယျ့ ကြောနံပါတျ(၇)ရဲ့ ပိုငျရှငျသဈက ဘယျသူမြားဖွဈမလဲ။ ဒါက ရီးယဲလျပရိသတျတှေ အရမျးစိတျဝငျစားနတေဲ့ မေးခှနျးတဈခုပါ။ ပျေါတူဂီ နာမညျကြျောကစားသမား စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo က (၉)နှဈကွာ ဝတျဆငျခဲ့ပွီး သူ မရှိတော့တဲ့နောကျမှာ ဒီနံပါတျနဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ ကစားသမားက ဘယျသူလဲဆိုတာ အခုလောလောဆယျတော့ ဝခှေဲမရသေးပါဘူး။ ရီးယဲလျအသငျးအနနေဲ့လညျး ဒီလို ဂန်ထဝငျနံပါတျကို ကစားသမားတဈဦးစီ အလငျြစလို လှဲပွောငျးပေးဖို့ မရှိဘဲ သသေခြောခြာ ဂရုစိုကျစဥျးစားသှားမယျ့ အနအေထားပါ။
ရီးယဲလျအသငျးဟာ အခုနှရောသီမှာ PSG အသငျးရဲ့ ပွငျသဈလူငယျကွယျပှငျ့ ဘာပေ Mbappe ကို ကွိုးပမျးနတောကွောငျ့ ဘာပကေ နံပါတျ(၇)ပိုငျရှငျသဈ ဖွဈလာမလားဆိုပွီး ပရိသတျတှေ စိတျဝငျစားနကွေတယျ။ စပိနျနာမညျကြျော အားကစားသတငျးစာ AS က ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ကြောနံပါတျ(၇)ကို လကျရှိ ကစားသမားထဲက ဘယျသူ ဝတျခှငျ့ရသငျ့သလဲဆိုတာ ပရိသတျတှကေို မဲဆန်ဒကောကျခံခဲ့တော့ အံ့အားသငျ့စရာ အဖွထှေကျလာပါတယျ။ အဲဒါကတော့ ရီးယဲလျပရိသတျတှကေ နံပါတျ(၇)ကို စပိနျလူငယျကွယျပှငျ့ အဆနျစီယို Asensio ကို ရှေးခယျြခဲ့လို့ပါပဲ။ ပရိသတျကွီးရေ . . ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ နံပါတျ(၇)ပိုငျရှငျသဈက သတငျးတှထှေကျနသေလို ဘာပေ ဖွဈနမေလား၊ ရီးယဲလျပရိသတျတှေ ဆန်ဒရှိနတေဲ့ အဆနျစီယို ဖွဈမလား၊ ဒါမှမဟုတျ နှဈပေါငျး (၃၈)နှဈအတှငျး နံပါတျ(၇) ဝတျဆငျမယျ့သူ မရှိတဲ့ ပထမဆုံး ရာသီဖွဈမလား ဆိုတာတော့ . . .